Shakhsi nuucee ah ayuu ahaa Sheekh C/laahi Sheekh Mad Rooble oo ay dileen Alshabab?- Dhageyso – Radio Muqdisho
Sheekh C/laahi Sheekh Maad Rooble
Maxamuud Sheekh Maday Sheekh Maad Rooble, oo Allah u naxariistee, Sheekh C/laahi Sheekh Mad Rooble uu adeer u yahay oo la hadlay Radio Muqdisho, ayaa sheegay in Sheekha lagu diley deegaanka Weydaw ee duleedka Muqdisho xilli uu ku soo jeeday magaalada Muqdisho.
Allah u naxariistee, Sheekh C/laahi oo hadda da’diisu aheyd 85 sano jir ayaa waxaa uu ahaa nin madax u ah dariiqada Qaadiriyah oo xarunteedu tahay deegaan ku dhow degmada Bardaale ee gobolka Baay. Isagoo xilkaas ka dhaxlay aabihiis Sheekh Maad Rooble oo ahaa caalim si weyn looga yaqaano gobolada Koofureed ee dalka.
Sheekh, waxaa uu lahaa xarumo lagu faafiyo diinta isla markaana ku xiran yihiin dad badan, maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa horey u faagay isla markaana dibadda u soo saaray qabriga Aabihiis Sheekh Maad Rooble oo ku aasanaa deegaanka Kooraar oo qiyaastii 5-KM u jira Bardaale.
Meydka Sheekh C/laahi Sheekh Maad Rooble,ayaa shalay laga duuliyay magaalada Muqdisho waxaana lagu aasay deegaanka Kooraar oo Aabihiis uu ku aasan yahay isla markaana ay ku taalo xarunta weyn ee Dariiqada uu isaga uu madaxa u ahaa.
Haddaba, Talifaftiraha Radio Muqdisho, Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar ayaa wareystay, Maxamuud Sheekh Maday Sheekh Maad Rooble isaga ayaana faahfaahinaya Taariikhda Sheekha.